Mabhuku mashanu pamusoro peiyouroeducation yekuverenga muzhizha | Kuumbwa uye kudzidza
Maite Nicuesa | 31/05/2021 22:54 | Matipi
Zhizha ndiyo imwe yenguva yegore iyo vaverengi vazhinji vanobatana nekunakidzwa kwe kuverenga. Neuroeducation ndiyo imwe yemisoro inopisa. Uye, nekudaro, iwe unogona kuwana akasarudzika mabhuku mundima iyi. Mukudzidzisa uye Zvidzidzo tinogovana sarudzo yemazita ekukurudzira iwe mukuverenga kwezhizha. Mabhuku mashanu pamusoro peiyouroeducation yekuverenga muzhizha!
1 Neuroeducation: Unogona chete kudzidza izvo zvaunoda
2 Iyo Agora YeNeuroeducation. Kutsanangurwa uye Kuiswa
3 Neuroscience yevadzidzisi
4 Kudzidza kudzidza
5 Uropi hwemwana hwakatsanangurira vabereki
Neuroeducation: Unogona chete kudzidza izvo zvaunoda
Ndezvipi zvinhu zvinokonzeresa maitiro ekudzidza? Iri bhuku rakanyorwa naFrancisco Mora rinopa mhinduro kumubvunzo uyu. Iri bhuku rinoumbwa nezvitsauko makumi maviri nemaviri umo muverengi anoongorora mumashiripiti ekudzidza kuburikidza nemifungo yakakosha manzwiro, kunzwira tsitsi, kuda kuziva, kutarisisa, ndangariro, hunyanzvi...
Dzidzo dzinonyanya kukosha dzinoenderana nekukosha kwemanzwiro. Kana mudzidzi akapinda chidzidzo chaanoda, nhanho yake yekutarisisa inovandudzika uye maonero ake enguva anochinja. Zvese zvinoita sekuyerera zviri nyore mune ino mamiriro. Mamiriro acho anochinja paanopenengura mukudzidza kwechinhu chakaomarara uye anomunetesa.
Iyo Agora YeNeuroeducation. Kutsanangurwa uye Kuiswa
Iri ibasa rakanyorwa mukubatana naIolanda Nieves de la Vega Louzado naLaia Lluch Molins. Ichi chirongwa chinomuka kubva mukukakavadzana nekubatana kuti vafunge nezvenyaya iyi. Nzvimbo yemusangano inoisa tarisiro yekutarisa pachinhu ichi chekudzidza: dzidzo uye kugona kwayo kwekushanduka-shanduka kuburikidza nekutsvaga kugona.
Iri ibhuku rinonakidza revadzidzisi, mhuri uye nyanzvi dzinoshanda mundima yekudzidzira. Iri bhuku rinopinda mukati menyaya iyi kuburikidza nehunyanzvi vari bhenji mune ino ndima.
Iri basa, iro rakanangana nenyanzvi dzinoperekedza vadzidzi mukunakidzwa kwekudzidza, zvinotsanangura zvese vashandi vagara vachida kuziva nezvehuropi. Iri basa rinopinda mune neuroeducation kuburikidza neyakareruka uye inonzwisisika mutauro kune veruzhinji.
David Bueno i Torrens, munyori webhuku rino, muongorori wegeneti uye purofesa paYunivhesiti yeBarcelona. Akashandawo semuongorori kuOxford University ine mukurumbira. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti neuroscience inoita mipiro yakakosha kune iyo nyika yekudzidza uye kudzidziswa. Naizvozvo, iri basa rinogona kunakidza kwazvo kuvadzidzisi vanokurudzira, kudzidzisa uye kudzidzisa vadzidzi.
Musoro webasa uri seinotevera: Natsiridza kugona kwako kudzidza nekutsvaga kuti uropi hunodzidza sei. Iri ibhuku rakanyorwa naHéctor Ruiz Martín. Yakadaro nyanzvi, biologist uye muongorori, ndiye director weInternational Science Teaching Foundation.
Muverengi webasa anogona kumisikidza nhaurirano yenguva dzose nemunyori webhuku anopindura mibvunzo yepasirese. Semuenzaniso, tsvaga kuti sei vamwe vanhu vaine nguva yakapusa yekudzidza kupfuura vamwe. Ndeipi kiyi yekuziva kwenguva refu inoramba iri mundangariro kupfuura kupfuura kwenguva?
Uropi hwemwana hwakatsanangurira vabereki
Iri ibasa ra Álvaro Bilbao iro rinogona kuve rinonakidza kuvabereki avo, panguva yezororo rezhizha, vanoda kutsvaga nzvimbo yekuverenga mabhuku panenyaya iyi. Hudiki inguva yehupenyu inoitika iyo yekumwe kudzidza kwakanyanya kunoitika. Uye huropi hwemwana hunoshanda sei? Iri bhuku rinopa mhinduro kumubvunzo uyu.
Ndeapi mamwe mazita aunoda kukurudzira kune vamwe vaverengi veTraining uye Study? Aya mabhuku mashanu ezve neuroeducation yekuverenga muzhizha anogona kukukurudzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Noticias » Matipi » Mabhuku mashanu pamusoro peiyouroeducation yekuverenga muzhizha